Su'aal: Markaan dhidido waxaan dareemaa cuncun?
Author Topic: Su'aal: Markaan dhidido waxaan dareemaa cuncun? (Read 4746 times)
« on: October 12, 2009, 10:11:08 PM »
waad Mahadsantihiin dhamaan walaalaha qiimaha badan ee u istaagay Hooshan
qiimaha badan run ahaanti aad ayaan ugu farxay markaan arkay web kahadlaya
waxa dhamaan somalidu ay u oomantahay oo ah beyad caafimaad arintana wa arin maraka aad aragto web noocan oo kale aad ugu farxeysid.
intaas hadii an ku dhafo waxan kalo umahad celinaya Dr.Mahdi oo gacan ween iga siiyay sidi an ku heli laha Fursad aan ku soo gudbiyo Su'asha aan qabo.
waxan raba in an weydiiyo bahweenta Somalidoc.com
I'm teen age boy marka qofka haduu teenage yahay waxa uu lakulama sida iska caadiga ah isbadalo xaga jirka ama maskaxsda ha ahadan
aniga waxa badan ayan waxan kacawanayay xaga Skin ka lakin hada al-xamdulilaah.
sometimes markan Dhidido ama an qubeysto ama an weeseysto waxan dareema Cun cun xaga skinka arinta na ayan waxan raba in information iga siisan
« Reply #1 on: October 14, 2009, 12:00:02 PM »
Views: 6630 January 29, 2012, 10:50:28 PM
Views: 8335 April 19, 2011, 09:51:52 PM
Views: 6160 November 01, 2011, 10:39:11 PM
Views: 11736 December 18, 2015, 08:07:37 PM
Views: 4080 January 09, 2016, 03:27:06 PM